Address: No(8A), Shwe Hlaing Street, Kyimyindaing Township, Yangon, Myanmar.
Listed: February 16, 2015 5:06 pm
@လူကြီးမင်းများ လုပ်ငန်းမှ စာရင်းဇယား များကို Manual မှ Computerised ပြောင်းချင်
သူများ / Version အဟောင်းမှနောက်ဆုံး Version (သို့) License Version ပြောင်းချင်သူများအတွက် MYOB accounting software ကိုဝန်ဆောင်မှုကောင်းစွာေ၇ာင်းချပေးနေပါသည်။
@MYOB software တွင် Cash book,Sale & AR,Purchase & AP,Inventory Control များပါဝင်သည့်အပြင်,Multi warehouse(location),Multi currency,Multi pricing level,Invoice/Bill customise form,User အလိုက်အလုပ်များခွဲဝေအသုံးပြုနိုင်ခြင်း,User အလိုက် security ပိတ်ထားနိုင်ခြင်း,Daily backup,Daily transaction lock အပြင် ဘယ် User က ဘယ်data ပြင်သွားခြင်းဖျက်သွားခြင်းများပြန်ကြည့်နိုင် ပါသည်။ ထို့ပြင် Integrated System ဖြစ်သဖြင့် Report ထုတ်ရန် Closing Stock ရှာစရာမလိုခြင်း, Yearly Posting ပြန်လုပ်ရန်မလိုခြင်း, Transaction သွင်းသလောက် Stock balance update ဖြစ်ခြင်း, Data file သည် exe ဖြစ်သဖြင့် မိမိဘာသာ စက်တခုမှတခု အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ခြင်း, Branch အလိုက် Project အလိုက် သီးခြားစာရင်းများခွဲထုတ်ကြည့်နိုင်ခြင်း , Man Power သက်သာခြင်း စသည့်အားသာချက်များပါဝင်ပါသည်။ ”Permanent licenses” ဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ်ကြေး များမရှိခြင်း , package တခုဝယ်ရုံဖြင့် မတူညီတဲ့လုပ်ငန်း ၅ ခုအသုံးပြုနိုင်ခြင်း,User training and service support များရှိသဖြင့် အသုံးပြု ရန်အဆင်ပြေသော Software တခုဖြစ်ပါသည်။ထို့ပြင် report ပေါင်း 160 ကျော်ပါဝင်ပြီး,business analysis dashboard ပါအသုံးပြုနိုင်သဖြင့်မိမိလုပ်ငန်းအခြေအနေကိုလျင်မြန် စွာအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်နိုင်ပါသည်။
@ထို့ပြင်ယနေ့ခေတ်တွင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုှးဧ။် စာရင်းများတွင် အသုံးများလာသော စာရင်းကိုင် software ဖြစ်ပါသည်။ကျွန်တော်များဧ။် လုပ်ငန်းအနေဖြင့် software ၀ယ်ယူသူတိုင်းအား “Service Support” များပေးခြင်း , သင်တန်းမတက်ဖူးသးများအနေဖြင့် “Training Plan” များရှိခြင်း , ထို့ပြင် Training အပြင် လုပ်ငန်းသဘာဝကိုလိုက်ပြီး “Discussion & Implementation”များထည့်ထားပေးခြင်းဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်
@ထို့ပြင် MYOB Software သည် Integrated System အသုံးပြုထားခြင်းကြောင့် အထက်ပါ အားသာချက်များစွာရှိသလို အားနဲချက်လဲရှိပါသည်။ ထိုအားနဲချက်မှာ User များတပြိုင်နက် Concurrent သုံးသောအခါ နှေးခြင်း Termination Code တက်ခြင်း ရှိတတ်ပါသည်! ထိုအားနဲချက်များကို ကျွန်တော်များလုပ်ငန်းမှ ဖြေရှင်းရန် Remote(TSspeedbooster) ပုံစံအသုံးပြုခြင်း ကို package ၀ယ်ယူရာတွင်ထည့်သွင်းပေးထားသဖြင့် software အာနဲချက် အားဖြေရှင်းပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
Ad Reference ID: 88754e19b2cc414d
All times are GMT 6.5. The time now is 7:13 pm.